Malunga nathi -Shijiazhuang Kunxiangda Technology Co., Ltd.
Shijiazhuang Kunxiangda Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2013. thina imveliso yokwenziwa intermediates zoxubo mayeza kunye nenkampani yorhwebo for abaphakathi idayi, kunye nezinye izinto zemichiza ekrwada. Umzi-mveliso wethu ubekwe kwindawo yoPhuhliso lwezoqoqosho kunye neTekhnoloji yeSixeko saseShijiazhuang, kwiphondo lase-Hebei. Iindawo zizonke zimalunga neehektare ezingama-50, kwaye kukho abasebenzi abangaphezulu kwama-300, kubandakanya abasebenzi abali-9 bezobuchwephesha.
Sivelisa ikakhulu i-1,3-dimethylurea (DMU) kwaye senza ishishini neMethylurea (MU), 6-Amino-1,3-dimethyluracil (DMAU), 6-Chloro-3-methyluracil (CMU), 6-Chloro-1, I-3-dimethyluracil (CDU), iSodium Cumenesulfonate (DMS), i-Ethylene glycol diformate (EGDF) kunye nezinye izinto eziphakathi zamayeza kunye nezidayi eziphakathi. Siye saseka iqela procurement zobungcali ukunceda abathengi enkulu angaphandle ukufumana abathengisi abafanelekileyo abafanelekileyo kwimarike yasekhaya China. Kwaye siye savuma ngamxhelo mnye ngabathengi. Ngexesha elinamava eminyaka elishumi, sinegama elihle phakathi kwabathengi abadala nabatsha. Iimveliso zithunyelwa eYurophu, eMzantsi Melika, eAsia, kuMbindi Mpuma kunye namanye amazwe kunye nemimandla, kwaye zamisela uthungelwano lokuthengisa oluzinzileyo noluzinzileyo.
Sisekele ubudlelwane bexesha elide kunye neYunivesithi yaseTsinghua kunye neYunivesithi yaseHebei yeSayensi kunye neTekhnoloji ukuphucula itekhnoloji yemveliso yeemveliso esele zikho, ukunciphisa iindleko, ukuphucula umgangatho, kunye nokuqinisekisa ukuba inqanaba lobuchwephesha likhokelela ekhaya nakumazwe aphesheya. kwangaxeshanye, siyaqhubeka nokuphuhlisa iimveliso ezintsha ukukhuthaza uphuhliso oluzinzileyo lwenkampani.Iinkampani ezinamathele kwingcinga yemvisiswano, ingqibelelo, uphuhliso, ukuphumelela-win, sikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba umgangatho bubomi beshishini, ukubonelela abathengi ngomgangatho iinkonzo zenjongo yeshishini.
Sisoloko sizama ukuba liqabane elithembekileyo kubathengi bethu, kwaye sizabalazele ukwakha abathengi abathembekileyo, abahlonitshwayo ngokwasentlalweni, ishishini lemveliso yeekhemikhali elungileyo! Ndiyathemba ukuba sinokuba namaqabane amahle ngakumbi kwihlabathi liphela! Kwaye sijonge phambili kutyelelo lwakho!